နှစ် ဦး ခွဲခြားစာရင်း Leetcode ဖြေရှင်းချက် - TutorialCup ပေါင်းစည်း
ပင်မစာမျက်နှာ » LeetCode Solutions » နှစ် ဦး ခွဲခြားစာရင်း Leetcode ဖြေရှင်းချက်ပေါင်းစည်း
မကြာခဏမေးတယ် Adobe က အမေဇုံ Apple ဘလွန်းဘာ့ဂ် Capital One Facebook က Google IBM က Microsoft က Oracle က
ချိတ်ဆက်စာရင်းများ အတော်လေးသူတို့ရဲ့ linear ဂုဏ်သတ္တိများအတွက် Array ကိုကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ စုစုပေါင်းခွဲထားသောခင်းကျင်းမှုတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းရန်အတွက်နှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည့် Array ကိုပေါင်းစည်းနိုင်သည်။ ဤပြproblemနာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ် ဦး ခွဲထားသောဆက်စပ်စာရင်းနှစ်ခုကိုပေါင်းစည်းရမည် အရပျ၌ နှစ်ခုလုံးစာရင်း၏ဒြပ်စင်တစ်ခုစီထားသောဖက်ရှင်အတွက်ပါရှိသောစာရင်းအသစ်ပြန်သွားဖို့။
နှစ်မျိုးခွဲထားသောစာရင်းနှစ်ခုကိုပေါင်းစည်းရန် C ++ အစီအစဉ်
Sorted Lists နှစ်ခုကိုပေါင်းစည်းရန် Java Program
နှစ် ဦး ခွဲခြားစာရင်းနှစ်ခုပေါင်းစည်းရန်အချိန်ရှုပ်ထွေး
နှစ် ဦး ခွဲထားစာရင်းနှစ်ခုပေါင်းစည်းရန်အာကာသရှုပ်ထွေး
ထိုသို့ပြုရန်အရိုးရှင်းဆုံးနည်းမှာအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည် two-pointer နည်းပညာ။ စာရင်းအသစ်တခုကိုဖန်တီးပါ။ သေးငယ်တဲ့ element တွေကို pointers နှစ်ခုကြားမှာထည့်ပြီးသက်ဆိုင်ရာ pointer ကိုတိုးပါ။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်နေရာထပ်ဖြည့်သောအပိုစာရင်းတစ်ခုလိုအပ်သည်။
Optimal Approach သည်လုပ်ရန်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်နေရာတစ်ခုကိုလောင်စေသင့်သည် နေရာ မျိုး။ ကျနော်တို့ကြားမှာချဉ်းကပ်နည်းကိုလိုက်နာနိုင်ပါတယ်။ စာရင်းနှစ်ခုလုံးတွင် node များသိမ်းထားပြီးဖြစ်သည်။ list pointer အသစ်တစ်ခုကို၎င်း၊လာမည့်ထောက်ပြ"မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော node များညွှန်ပြသင့်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးသည် အဘယ်သူမျှမ node အသစ်များ။
function တစ်ခုဖန်တီးပါ mergeTwoSortedLists () ကြောင်းအငြင်းပွားမှုများအဖြစ်နှစ်ခုစာရင်းထောက်ပြသည်
စာရင်းတစ်ခုခုကိုဖြစ်ပါတယ်လျှင် null အခြားတစ်ခုသို့ပြန်သွားပါ
တစ်ဦး Create အပူချိန် နှစ်ခုလုံးစာရင်း၏ခေါင်းများအကြားသေးငယ် node ကိုညွှန်ပြလိမ့်မည်ဟု variable ကို
အနည်းဆုံးတော့ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်တွင်အနည်းဆုံး node တစ်ခုကိုထည့်သွင်းထားသဖြင့်ခေါင်းတစ်လုံးတိုးရမည်
၎င်းသည် subproblem ကိုဖန်တီးသည်။ ဒါကြောင့်တူညီတဲ့ recursive function ကိုခေါ်ပြီး၎င်းကို temp သို့ထည့်ပါ
List1.value <List2.value လျှင်
temp = ListNode အသစ် (List1.value) , Temp-> လာမယ့် = mergeTwoSortedLists (List1-> နောက်၊ List2)
List2.value <= List1.value လျှင်
temp = ListNode အသစ် (List2.value) , Temp-> လာမယ့် = mergeTwoSortedLists (List1, List2-> next)
ပြန်လာ အပူချိန် လိုချင်သောစာရင်းရရန်
ခေါ်လိမ့်မည်သည့်စာရင်း pointer အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပါ ကဗျာ။
၎င်း၏ထိန်းသိမ်းရန်preheadကျွန်တော်တို့စာရင်းကိုဝင်ရောက်နိုင်အောင်” (pointer copy) ဦးခေါင်း လိပ်စာ။
အဆိုပါ "လာမည့်ထောက်ပြ"dummy_head ၏" ကိုစာရင်းထဲတွင်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော node များညွှန်ပြသောထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ကြိုးကိုင်ရပါမည် l1 နှင့် l2.
list point နှစ်ခုမှတန်ဖိုးနည်း node ကိုထပ်ထည့်ပါ dummy_head, သက်ဆိုင်ရာ pointer ကိုတိုး။
အခုတော့ထောက်ပြအနည်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် null ။ ဒီတော့ append non-null အဆိုပါ Dummy ခေါင်းကိုစာရင်းပြုစုပါ။
ပြန်လာ ဦးခေါင်း အဆိုပါ Dummy စာရင်း၏။
အချိန်ရှုပ်ထွေး နှစ် ဦး ခွဲခြားစာရင်းပေါင်းစည်းရန်
အို (N + M)၊ ဘယ်မှာ N နှင့် M နှစ်ခုစာရင်းများ၏အရှည်ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့နှစ် ဦး စလုံးချဉ်းကပ်မှုအတွက်တစ်ကြိမ်စာရင်းနှစ်ခုလုံးဖြတ်သန်း, ဒါကြောင့် algorithms နှစ် ဦး စလုံး linear ဖြစ်ကြသည်။
အာကာသရှုပ်ထွေးမှု နှစ် ဦး ခွဲခြားစာရင်းပေါင်းစည်းရန်
အကောင်းဆုံးချဉ်းကပ်မှုတွင်နားလည်ရန်အရေးကြီးသည် အဆိုပါထောက်ပြ manipulate။ ဒီတော့ variable များအတွက်အမြဲတမ်းနေရာဟာ memory memory ကိုသုံးတယ်။ ထို့ကြောင့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာအာကာသရှုပ်ထွေးမှုရှိသည် အို (၁). အို (N + M) အာကာသကိုဆွေးနွေးထားတဲ့နုံချဉ်းကပ်မှုတွင်အသုံးပြုသည်။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား LeetCode Solutions Tags: Adobe က, အမေဇုံ, Apple, ဘလွန်းဘာ့ဂ်, Capital One, လွယ်ကူသော, Facebook က, Google, IBM က, ချိတ်ဆက်စာရင်း, Microsoft က, Oracle က post navigation